चितवन मेडिकल कलेजमा एक महिलाले ५ किलो ५५ ग्राम तौलको बच्चा जन्म दिएकी छन् « Nepal's number 1 Entertainment news portal
चितवन मेडिकल कलेजमा एक महिलाले ५ किलो ५५ ग्राम तौलको बच्चा जन्म दिएकी छन्
Published : 10 August, 2020 9:02 pm
भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा एक महिलाले ५ किलो ५५ ग्राम तौलको बच्चालाई जन्म दिएकी छन्। मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ शिखरपानीकी ३० वर्षीया सिता लोप्चन डिम्डुङ आइतबार स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल आइपुगेकी थिइन्। तत्कालै भिडियो एक्स-रे गर्दा बच्चाको तौल साढे ४ किलोभन्दा बढी देखिएपछि चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए।
सोमबार विहान करिब ९ बजे शल्यक्रियामार्फत बच्चा (छोरी) लाई जन्म दिएको अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. वसन्त शर्माले जानकारी दिए। डा. वन्दना खनाल, डा. प्रेक्षा सिंह र डा. रेनुका ताम्राकारसहितको टोलीले शल्यक्रिया गरेको थियो। डा. शर्माकाअनुसार भिडियो एक्स–रे गर्दा साढे ४ किलो भन्दा बढी तौलको बच्चा देखिए शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ।
करिब ५ वर्षदेखि उक्त अस्पतालमा काम गर्दै आएका डा. शर्माले यति धेरै तौलको बच्चा अहिलेसम्म नदेखेको बताए। ‘यसअघि ४ किलो आठ सय ग्रामसम्मका बच्चा त देखेको हो तर ५ किलो भन्दा बढी तौल भएको बच्चा त पहिलो पटक देखियो’, उनले भने। नेपालमा सामान्यतया बच्चा ठूलो जन्मनुको कारण वंशाणुगत देखिएको डा. शर्माले बताए । ‘यद्यपी मधुमेहलगायतका समस्याका कारण पनि बच्चाको तौल बढी हुनसक्छ’, उनले भने।
यी महिलाको भने वंशाणुगत तथा शारीरिक अवस्थाका कारण ठूलो बच्चा जन्मिएको उनको भनाइ छ। उनको तौल ११० किलो र उचाई ५ दशमलव ६ फिट छ। तेस्रो सन्तानको जन्म दिएकी सिताको पहिलो बच्चा ११ वर्षका छन्। उनी जन्मिदा ४ किलो १ सय ग्रामका थिए। दोस्रो बच्चा ४ किलो ९ सय ग्रामको जन्मिए। अघिल्ला दुवै बच्चा अपरेशन नगरी जन्मिएका थिए। श्रीमतीलाई लिएर स्वास्थ्य जाँचका लागि हेटौंडा अस्पताल पुगेका श्रीमान लालबहादुर डिम्डुङले उक्त अस्पतालले भरतपुर रिफर गरेको बताए।